Myanmar Entrepreneurs Network Monthly Meetup (@ Yangon) - Myanmar Entrepreneurs Network (Yangon)
Myanmar Entrepreneurs Network Monthly Meetup (@ Yangon)
Monday, January 2, 2017 6:30 PM Ya Kun Cafe FMI Center (Parkson)
FMI Center, Ground Floor, Bogyoke Aung San Road (Besides Scott Market), Pabedan Township, Yangon , Yangon
This is the monthly meetup of Myanmar Entrepreneurs Network Monthly Meetup (MMEN). We were excited to hear that some of you had met useful contacts, and some even managed to form mutually beneficial partnership for your business during the first meetup! Congratulation! For first time members, MMEN isaplatform for fellow entrepreneurs and investors to gather, share ideas on doing business in Myanmar, learn from each other on key areas (e.g HR, Financing, law) or even possibly form partnership! This is held on the first Monday of every month. There is no entrance fee and you pay for whatever food or drinks you order. Bring your friends along foranight of good conversation and good food and we do look forward to seeing you all there! အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ။ ယခုတွေ့ဆုံပွဲသည် MMEN ၏ ပထမဆုံးသော လုပ်ငန်းရှင်များ လစဉ် တွေ့ဆုံပွဲ ဖြစ်ပါသည်။ MMEN သည် စီးပွားရေး အကြံဥာဏ်ကောင်းများ ဖလှယ်ရန် အတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၀န်ထမ်းရေးရာ ငွေကြေး ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဥပဒေ စသည့် ကိစ္စများနှင့် ပက်သက်ပြီး အချင်းချင်း အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်နိုင်ရန် မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များ ဆက်သွယ် စုဝေးရာ နေရာ ဖြစ်သည်။ ယခုတွေ့ဆုံပွဲတွင် မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ စားသောက် ၀ိုင်းဖွဲ့ပြောဆိုနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါသည် ။
A. Please read all the instructions below. Driving and walking and public transport instructions are as below.
Q. How do I know who in the cafe are coming for MMEN? A. Just ask anyone you see in the Ya Kun Cafe "are you here for the MMEN meetup?", the odds are that they are. Of course, if you can recognize us, you can come by and we will be happy to haveachat with you.
Q. What is the agenda of this monthly Myanmar Entrepreneur gathering?
A. There is no agenda. It isafree-and-easy meet-and-greet coffee session. Q. Why am I FORCED to buyadrink and/or food?
A. You are not forced to buyadrink here. As there is NO CHARGE from the MMEN for you to attend the event. We do ask that you buy at leastadrink from the cafe.
Q. Why Ya Kun FMI cafe? A. The decision to select Ya Kun cafe was based on the fact that it is in downtown. Taxi drivers will definitely know this location and buses to return are abundance at Sule even after the finish ends at 8.30pm. Car Parking is also available at FMI Center after 6pm and it is FREE! All these and the fact that the cafe is usually rather empty after 7pm is another plus point. Q. I am not an entrepreneur/I amastudent/I am thinking of becoming an entrepreneur/I amagovernment worker/I amacorporate worker/etc. Am I still allowed/able to come for the event?
DIRECTIONS TO YA KUN FMI CENTER (PARKSON)
Map of Ya Kun FMI Center (Parkson): https://www.google.com.mm/maps/place/FMI/@16.7804388,96.1542256,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x30c1ec83dd605031:0x5e62b621d7e2b217!2sFMI!3m1!1s0x30c1ec83dd605031:0x5e62b621d7e2b217?hl=en
For those driving, parking is abundant at FMI Center and there is no charge if you enter after 6pm.
For those taking taxi, please tell the Taxi Driver that it is FMI Center (Parkson) in downtown near to Bogoke Market; not the one far far away! Walking instructions from Sule Pagoda
Walk along Sule Pagoda Road until you pass by Shangrila Hotel Sule. Turn left into Bogoke Aung San Road and continue walking straight. At Central Hotel, cross the road and continue walking towards Bogoke Market. You will be able to see Parkson in less than5minutes. Ya Kun Cafe is just besides Parkson.
MMEN လစဉ်တွေ့ဆုံပွဲများနှင့် ပက်သက်ပြီး မေးခွန်းအချို့(FAQs)ကို အောက်တွင် ဖြေဆိုပေး ထားပါသည်။ Q. လစဉ်တွေ့ဆုံပွဲ နေရာသို့ လမ်းညွန်ပေးပါ။ A. ကား၊ Bus ကား သို့မဟုတ် ခြေကျင်ဖြင့် လစဉ်တွေ့ဆုံပွဲကို လာရောက်နိုင်ရန် အောက်တွင် အသေးစိတ် လမ်းညွန်ပေးထားပါသည်။ Q. တွေ့ဆုံပွဲတွင် အခြားသူများကို မရင်းနှီးဘဲ ရောက်ခဲ့ရင် အဆင်ပြေပါ့မလား ။ A. YAKUN ရောက်လျှင် တွေ့သည့် မည်သူ့မဆို မိတ်ဆက်ကာ “MMENကို လာတာလား“ ဆိုပြီး မေးလိုက်ပါ။ တွေ့သည့် အမေးခံရသည့် လူအတော်များများသည် MMEN သို့ လာသူ ဖြစ်နိုင်ချေ များပါသည်။ ထို့အပြင် Organiser များ (Thet Zin & TH) က ဖိတ်ထားတာ ဖြစ်လို့ Organiser များကို မြင်လျှင်လည်း ခေါ်ပါ ပြောပါ နှုတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ Q. တွေ့ဆုံပွဲ၏ အစီအစဉ်များ(Agenda)ကို သိလိုပါသည်။ A. တွေ့ဆုံပွဲတွင် အစီအစဉ်များ(Agenda) မထည့်ထားပါ ။ အေးအေးဆေးဆေး တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်ပြီး ကော်ဖီ အတူသောက်ကာ စကားပြောနိုင်ရန်သာ စီစဉ်ထားပါသည်။ Q. YAKUN တွင် အစားအသောက်မှာမှသာ MMENတွေ့ဆုံပွဲကို လာရမည်လား။ A. တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဝင်ကြေးကောက်ခံခြင်း မရှိသလို အစားအသောက်များ အတင်းရောင်းချခြင်း မရှိ သော်လည်း နေရာပေးထားသော YAKUN ကို အားနာသော အနေဖြင့် အပြင်အစားအသောက် မယူလာရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ YAKUN မှလည်း အားပေးလိုလျှင်လည်း ဝယ်ယူ သုံးဆောင် နိုင်ပါသည်။ Q. YAKUN ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ပါသလဲ။ A. YAKUN သည် မြို့ထဲ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးနှင့် နီးသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ကား၊ Bus ကား၊ ရထားနှင့် လာရောက်ရန် အလွန် အဆင်ပြေသော နေရာဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသည် Taxi သမားများ ရင်းနှီးသည့် နေရာ Bus ကားမှတ်တိုင်၊ ဘူတာရုံနှင့် နီးသည့် နေရာဖြစ်ပြီး YAKUN မှာ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးဘေး Parkson Shopping Mall သို့မဟုတ် FMI Shopping Mall အောက်ထပ်တွင် ရှိပြီး ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမမှလည်း လှမ်းမြင်နိုင်ပါသည်။ Parkson Shopping Mall အနောက်ဖက်တွင် ၆နာရီနောက်ပိုင်း Parking ကြေးပေးစရာ မလိုဘဲ ကားရပ်နားနိုင်ပါသည်။ Q. လုပ်ငန်းရှင် မဟုတ်ဘဲ ကျောင်းသား၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်လိုသူ၊ အစိုးရ ဝန်ထမ်း၊ Company ဝန်ထမ်းများ လာရောက်နိုင်ပါသလား။ စိတ်ဝင်စားသူတိုင်းကို လာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
တွေ့ဆုံပွဲ နေရာ (YA KUN CAFE, PARKSON SHOPPING MALL) လမ်းညွန် YA KUN သို့ လမ်းညွန်မြေပုံ https://www.google.com.mm/maps/place/FMI/@16.7804388,96.1542256,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x30c1ec83dd605031:0x5e62b621d7e2b217!2sFMI!3m1!1s0x30c1ec83dd605031:0x5e62b621d7e2b217?hl=en ကိုယ်တိုင် ကားမောင်းသူများအတွက် FMI Parkson Shopping Mall အနောက်ဖက် ကား parking တွင် ၆နာရီနောက်ပိုင်း Parking ကြေးပေးစရာ မလိုဘဲ ကားရပ်နားနိုင်ပါသည်။ Taxiနှင့် လာရောက်မည့် သူများအတွက် Taxi ငှားလျှင် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးဘေး Parkson Shopping Mall သို့မဟုတ် FMI Shopping Mall ဆိုလျှင် Taxi သမားတိုင်း အလွယ်တကူ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ လမ်းလျှောက်လာလျှင်လည်း ဆူးလေမှ Shangri-La Hotel (ယခင် Traders Hotel) ကျော်လျှင် ဘယ်ဘက်ချိုးကာ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအတိုင်း လျှောက်လာပါက Central Hotel ရောက်လျှင် လမ်းကူး လိုက်ရုံဖြင့် Parkson Shopping Mall အောက်ထပ်ရှိ YAKUN ဆိုင်းဘုတ်ကို မြင်ရနိုင်ပါသည်။
Head of Operation & Marketing for Ya Kun Cafe Chain in Myanmar; Former technology entrepreneur
Co founder of Living Irrawaddy Travel Agency,
Marketing Manager (Campaign Management) at AYA...
Thet Zin and 1 more
The Myanmar Entrepreneurs Network (MMEN) isaplatform to connect local entrepreneurs and investors throughaseries of networking sessions and themed events. Through these entrepreneurs-focused events, MMEN aims to support entrepreneurs of all levels in their quests to advance in their journey. MMEN isaisanon-profit, non-governmental network who also has chapters in Singapore (SEN) and Malaysia (MEN) to facilitate members' expansion into the international market. <br>MMEN's events are generally separated into two types. <br>1. Monthly Networking Meetup <br>Day: The first Monday of every month (Onceamonth) <br>Time: 6.30pm - 9pm <br>Venue: Ya Kun at FMI Center Parkson <br>Fee: Free <br>Details: This is an open networking session where entrepreneurs from every industries are welcome to attend. With no agenda or speaker, attendees are free to network with fellow entrepreneurs to share ideas on doing business in Myanmar, learn from each other on key areas such as HR, financing, law or even form business partnership. To date, this is the largest cross-industry, Burmese-focused open networking sessions held in Yangon with more than 350 attendees at each meetup. 2. Ad-Hoc Themed Events <br>Day: Ad Hoc (but usually onceamonth) <br>Details: MMEN also organizes smaller events which focuses on topics relevant to entrepreneurs. These workshops usually address common problems faced by entrepreneurs or provide networking opportunities for specific industry. In June, MMEN organized2workshops educating entrepreneurs on corporate law and human resources management. Interested entrepreneurs can keep track of these events through MMEN Facebook group or meetup.com group. RULE #1 The MMEN meetup welcomes any aspiring (meaning still employed, unemployed or studying) OR existing entrepreneurs that are not in the business of Multi-Level Marketing RULE #2 There is NO CHARGE from the MMEN for you to attend the event. However, I do ask that you i.) do not bring in your own food and drinks to the cafe venue and ii.) buy at leastadrink from the cafe. With no cost in attending, the least that you can do is to give some business to the cafe that has kindly given us space to gather. Please note that this is notaplatform for Multi-Level-Marketeers or companies/individuals wishing to give talks or to sell to MMEN members either during the event, via notices or private unsolicited messages via meetup.com; all such violations will be emailed to abuse@meetup.com for their actions. If you are joining MMEN with that intention, I do kindly ask that you bring that intention elsewhere; There are various other Singapore meetup groups that will welcome you and your intentions, but not MMEN. <br> Meetup.com: http://www.meetup.com/Myanmar-Entrepreneurs... FB group: https://www.facebook.com/groups/MyanmarEntrepreneursNetwork/ <br> "Just wanna say thanks for organizing last night event. It was very successful and I managed to meetafew valuable contacts. Thank you once again" ---- Everett Teo, Founder of Yangon Setup Company မြန်မာစွန့်ဦးတီထွင်သူများကွန်ယက် လို့အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ MMEN ဆိုတာကတော့ ပြည်တွင်းက စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေကနေတဆင့် ဆုံဆည်းမိအောင် ချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ MMEN ဟာ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက် တွေဆီသွားရာ ခရီးလမ်းကိုသွားရင်း လိုအပ်လာတဲ့ အသိပညာတွေ၊ထောက်ပံ့မှုတွေကို ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး အဲဒီလို စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေကို အဓိကထားတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေကို စီစဉ်ကျင်းပ နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ MMEN ဟာ အကျိုးအမြတ်ရှာဖွေခြင်းမပြုတဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်အထိဖြန့်ကျက်နိုင်စေဖို့အတွက် စင်္ကာပူ(SEN) နဲ့ မလေးရှား(MEN) တို့မှာလည်း အဖွဲ့ခွဲတွေရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ MMEN ဟာပုံမှန်အားဖြင့် ပွဲတွေကို ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ ၁။ လစဉ်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့ ။ ။ လတစ်လ၏ ပထမဆုံး တနင်္လာနေ့ (တစ်လ၊တစ်ကြိမ်) အချိန်။ ။ ညနေ ၆ နာရီခွဲ မှ ၉ နာရီ နေရာ။ ။ FMI Center Parkson ရှိ Ya Kun ၀င်ကြေး။ ။ အခမဲ့ လစဉ်ကျင်းပတဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲတွေကတော့ နယ်ပယ်အသီးသီးက စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေတက်ရောက်တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲအစီအစဉ်နဲ့ ဦးဆောင်ဟောပြောသူတွေမပါဝင်ပဲ ပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေဟာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ဆုံကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအိုင်ဒီယာတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖလှယ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ HR၊ ဘဏ္ဍာရေး နဲ့ ဥပဒေ တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အပြန်အလှန်လေ့လာသင်ယူနိုင်သလို စီးပွားရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးတွေတောင် ပေါ်ပေါက်လာစေနိုင်တဲ့ ပွဲတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ အထူးအကြောင်းအရာတစ်ရပ်အတွက်ကျင်းပသောပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့။ ။ အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်၍လိုအပ်သလိုကျင်းပသည်၊ (သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်ခန့် ကျင်းပလေ့ရှိ) MMEN ဟာ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေအပေါ်မှာ အဓိကအာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်တဲ့ ပွဲခပ်ငယ်ငယ်တွေကိုလည်း ဦးဆောင်ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆိုရင် စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေ ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိတဲ့ပြဿနာတွေအတွက် အဖြေရှာတာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် နယ်ပယ်အလိုက် စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအတွက် အဆက်အသွယ်အထောက်အပံ့တွေပံ့ပိုးပေးတာမျိုးတွေကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဇွန်လအတွင်းမှာ MMEN ဟာ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေကို ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေ နဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု နဲ့ပတ်သက်လို့ ပညာပေးဆွေးနွေးတဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ နှစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ MMEN ဟာ ဓူဝံမီဒီယာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လည်း စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အကျိုးရှိမယ့် ဟောပြောပွဲတွေ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကို စီစဉ်ကျင်းပလျှက်ရှိပါတယ်။ <br> စည်းကမ်းချက် ၁ MMEN မှ တက်ကြွပြီး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေး စတင်ရန် ကြံရွယ်သည့် မည်သူမဆို (၀န်ထမ်း၊ အလုပ် ခေတ္တရပ်နားထားသူ၊ သို့မဟုတ် ပညာသင်ကြားနေသူ) သို့မဟုတ် လက်ရှိ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသူများ MMEN၏ လစဉ် ဆုံတွေ့ပွဲများသို့ ဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။ *MLM လုပ်ကိုင်သူများ ပါဝင်ခြင်း မရှိပါ ။ စည်းကမ်းချက် ၂ MMEN လစဉ် ဆုံတွေ့ပွဲများ တက်ရောက်ရန် အခကြေးငွေ ပေးသွင်းရန် မလိုပါ။ သို့သော် အပြင် အစားအသောက်များကို မယူလာဘဲ ဆုံတွေ့ပွဲ ပြုလုပ်ရန် နေရာပေးသော ကော်ဖီဆိုင်ကို အားပေးသည့် အနေဖြင့် ကော်ဖီဆိုင်မှ ၀ယ်ယူ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။ MLM လုပ်ကိုင်သူများနှင့် မိမိ ပစ္စည်း ၀န်ဆောင်မှုများ ကြေငြာ ရောင်းချခြင်းများကို MMEN ဆုံတွေ့ပွဲများတွင် သို့မဟုတ် Private Message များမှ တစ်ဆင့် ကြေငြာ ရောင်းချခြင်းများကို MMEN မှ တားမြစ်ထားပါသည်။ တားမြစ်ချက်များကို မလေးစားဘဲ တစ်စုံတစ်ဦးမှ ချိုးဖောက်ပါက abuse@meetup.com သို့ ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။ <br>